व्यवसाय, विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्
कुनै पनि कम्पनी, यसको दीर्घकालीन कार्यको योजना बनाउनु हुँदैन , उत्पादनको विभिन्न कारकहरू मात्र गठबन्धन हुँदैन , तर तिनीहरूको नम्बर परिवर्तन गर्न पनि सही ढंगले स्केल प्रभाव लागू गर्न। जसरी सबैलाई थाहा छ, एक अनुपातमा विभिन्न कारकहरू परिवर्तन गर्न पूर्ण परिणामहरु लाग्दछन्। परिभाषा अनुसार, अर्थव्यवस्थामा स्केल प्रभाव वस्तु उत्पादनको उत्पादन र उत्पादन कारकहरूको लागतमा परिवर्तन बीचको अनुपात हो।
यस उत्पादन प्रकार्यको गणितीय सम्पत्तिले हामीलाई स्रोतहरूको मात्रा र प्रभावशीलता बीच सम्बन्ध वर्णन गर्न अनुमति दिन्छ। यो अवधारणा एक समयमा उत्पादनहरु को रिहाई को लागी के हुन्छ जब प्रश्न (समकक्ष) बराबर अनुपात मा वृद्धि हुन्छ। चूंकि स्केल प्रभावले यी कारकहरू चरहरू हुन् भन्ने कुराले, यो सूचकको सम्पूर्ण अवधारणा एकदम लामो समयसम्म छ।
यस पैरामीटरका लागि निम्न विकल्पहरू छन्, प्राप्त सूचकको मानमा निर्भर गर्दछ:
स्थिर वा अपरिवर्तित प्रभाव, जसमा आउटपुट भोल्युमले कारक लागतको रूपमा समान अनुपातमा परिवर्तन गर्छ;
सकारात्मक वा बढ्दै - यसको साथ, आउटपुट उत्पादन कारकहरूको लागत भन्दा धेरै बढ्छ;
नकारात्मक वा कम गर्न - यसको साथमा, आउटपुट भोल्युम कारक लागत भन्दा धेरै कम अनुपातमा बढ्छ।
उत्पादनको मात्रा निम्न चरणले निर्धारण गर्दछ:
कम रकमको व्यवस्थाको अभाव । सबै कारकहरू चर छन्।
केहि कारकहरु को आवेदन को अपर्याप्त तीव्रता। यस अवस्थामा, उनीहरूको अनुपातको निवारण ग्रहण गरिन्छ।
वस्तु उत्पादनको उत्पादनको स्तर र उत्पादनको लागि निरन्तर कारक अनुपातको संरक्षणले हामीलाई पैमानेको अनुमानित अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा ट्रेस गर्न अनुमति दिन्छ। यसको लागि, यो आवश्यक नक्शाको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। त्यसोभए जब अक्टोकन्ट कारक भोल्युममा वृद्धि को एक नै अनुपात संग आउँदैछ, यो एक सकारात्मक स्तर प्रभाव को संकेत गर्दछ; खैर, यदि तिनीहरू फैलिएका छन् भने त्यहाँ नकारात्मक असर छ। यदि तिनीहरू आफ्नो कदम राख्छन् भने एक स्थायी प्रभाव प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा, कुनै पनि नियमहरू छन् कि यस सूचकको कार्य दिशा दिशा विनियमित गर्दै छन्, र यसको परिभाषा केवल अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ केहि कारकहरू छन् जुन स्केलको प्रभावको विकासको पक्षमा छन्:
श्रम उत्पादकताको विकास (यसको गहिरो विभाजन संग);
साइज कारक (उपलब्ध टेक्नोलोजीको उत्पादन गर्दा उपलब्ध शक्तिशाली उत्पादनको उत्पादन);
नवीनतम प्रविधिहरू र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस्;
अधिकतम क्षमता उपयोग;
व्यवस्थापनमा विशेषज्ञता र अधिक कुशल श्रम प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यहाँ कारकहरू छन् जुन यस सूचकको विकासलाई असर पार्छ:
समन्वय र व्यवस्थापनमा कठिनाइहरू;
दुर्घटनाको दर र बोझको उपस्थिति बढ्यो;
बिक्री र यातायात खर्च को लागत मा वृद्धि;
प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि गर्नुहोस्।
मापदण्डको अवधि र प्रकृति सधैँ टेक्नोलोजीको विशेष र विशिष्टता द्वारा निर्धारित गरिन्छ, यसकारण, एक उद्योगको लागि केहि इष्टतम उत्पादन मात्रा विशेषता हो । केहि प्रकारको व्यवसायको संगठनमा मुख्य मुद्दा यो प्रश्न हो जसको उद्यमहरू अझ प्रभावकारी हुनेछ: सानो वा ठूलो। उद्यमको मात्राको परिमाणको अवधारणा अनुरूप बिक्री बजारको मात्रा द्वारा निर्धारण गरिन्छ । स्तरको बढ्दो अर्थव्यवस्था अक्सर उठ्छ जब ठूला उद्यमहरूले ठूला मौकाहरू छन्। यस्तो उत्पादनको एक सामान्य उदाहरण विमानन उद्योग हो।
कम्पनीको वित्तको कार्य
नमूना र नमूना रसिद: कसरी लेख्न सही तरिकाले?
सेवा सम्झौता अन्तर्गत दावी
काररामा संगमरमर संसार भरमा प्रसिद्ध छ
"Valkyrie" आकर्षण: उपयोग को सुविधाहरु
अडिट के हो?
विजयको लागि मेरो दादाको लागि धन्यबाद: विजय दिवसको लागि उपकरणहरू
को polycystic ovary सिंड्रोम कसरी पिट्न: लोक उपचार को उपचार
एक मग मा केक: एक स्वादिष्ट र सजिलो नुस्खा
Dermantinom संग दरवाजा असबाब गर्न को लागि: एक मास्टर वर्ग
"द हिड्ने मृत" को मृत्यु निम्न स्तरका श्रृंखला वर्ण को सबै भन्दा
कसरी "Yandex" -koshelek सिर्जना गर्न। छोटो निर्देशन
"ठूलो आँखा"। कास्ट - टिम बर्टन नयाँ तारा
कति गर्भवती खरायो जान्छ। कसरी डो गर्भवती छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न
तपाईं सपना गर्भावस्था थियो भने
वेल्डिंग मिसिन पलटनेवाला - आधुनिक र प्रयोगकर्ता-अनुकूल समाधान
सर्जिकल मुद्दा शीर्षक, मोटाइ, आकार